တရုတ် ASA Synthetic ဗဓေလသစ် Tile စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | CO-WIN
ဒြပ်ဗဓေလသစ်ခေါင်မိုး tile ကို
weatherproof အာသနန်းစံ PVC ခေါင်မိုးစာရွက်
3 အလွှာအပူကာကွယ်ပေးနိုင် upvc ခေါင်မိုးစာရွက်
အရောင် Transparent ကိုရှင်းလင်းရန်, အပြာ, ကြေးဝါ, အစိမ်း, opal ...
fireproof အဆောက်အဦးပစ္စည်းများအာသနန်းစံကုတ်အင်္ကျီ PVC အမိုးမိုး ...
ti ဖိလစ်ပိုင် decra အရောင်ပလပ်စတစ် PVC အမိုးမိုးစာရွက် / ...
အသေးစား Wave ကို PVC ခေါင်မိုးကွက်များ / မြှောင်းပုံပလတ်စတစ်ခေါင်မိုး ...
ASA Synthetic ဗဓေလသစ် Tile
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 1.9 - 7.2 / စတုရန်းမီတာ
Min.Order အရေအတွက်: 500 စတုရန်းမီတာ
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်နှစ်တာနှုန်း 90.000.000 စတုရန်းမီတာ
ဆိပ်ကမ်း: Foshan, ကွမ်ကျိုး, ရှန်ကျန်း
အဆိုပါ ASA ဒြပ်ဗဓေလသစ် tile ကို စပိန်စတိုင်ဒြပ်ဗဓေလသစ်ခေါင်မိုး tile ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ acrylonitrile, styrene နှင့် acrylic: ASA တစ်ကြိမ်မှာပစ္စည်းသုံးမျိုးအားဖြင့် Co-extruded ternary ပေါ်လီမာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ Two-အလွှာသို့မဟုတ်သုံးခု-layer ကို Co-extrusion နည်းပညာတစ်ခုခုကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလျှောက်ထားသည်။
မြင့်မားသောရာသီဥတုကိုခံနိုင်ရည်အင်ဂျင်နီယာဗဓေလသစ် ASA ၏①Theကလေးမွေးစားခြင်း, သေချာရဲ့မျက်နှာပြင်အလွှာအဖြစ်ကောင်းစွာအနည်းဆုံး 10 နှစ်က '' အရောင်တည်ငြိမ်မှု, သာလွန်ခရမ်းလွန်ခုခံနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချေးခုခံရှိပါတယ်စေသည်။
②ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုမြင့်မားတဲ့ခိုင်မာခြင်းနှင့်အတူ PVC ပစ္စည်းများပြုပြင်မွမ်းမံချိန်တွင်ကျောမှုအပေါ်မထိခိုက်စေဘဲခွန်အားကိုသေချာစေရန်မွေးစားဖြစ်ပါတယ်။
အစှမျးသတ်တိနှငျ့ကျောမှုနှစ်ခုလုံးကိုသေချာစေရန်မြင့်မားတဲ့ခိုင်မာခြင်း③Adopts။ အထူးပစ္စည်းလည်းနေရာတစ်အသိပေးထားပါတယ်, နှင့်အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းတောက်ပကြည့်ရှုစေသည်။
1. Long ကအရောင်တည်ငြိမ်ရေးတည်မြဲသော
2. Superior ချေး Resistance
4. Highly ကိုခံနိုင်ရည်မီး
5. မှလွဲ. waterproof စွမ်းဆောင်ရည်
သငျသညျကိုဆောက်ခေါင်မိုးသို့သင့်ရဲ့အပြားမိုးပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်စီစဉ်ကြသောအခါအဆိုပါစပိန်စတိုင် ASA ခေါင်မိုး tile ကိုတစ်ဦးစံပြအမိုးမိုးပစ္စည်းဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကသွန်းလောင်း, carports, အားကစားကွင်း, Villas, အားလပ်ရက်ကျေးရွာများ, မိုဘိုင်းအိမ်များ, အကြံအဖန်တွေချည်းအိမ်များ, ဥယြာဉျတဲအဖြစ်လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံအများအပြားသည်အခြားအမျိုးအစားများများအတွက်အသုံးအများဆုံးအဆောက်အဦးပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်: ASA ဗဓေလသစ် tile ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: ဒြပ် tile ကိုဗဓေလသစ်
မီး Resistance Synthetic စပိန်ခေါင်မိုး Tile
လျှပ်ကာ Synthetic ခေါင်မိုး Tile
ပလပ်စတစ် Synthetic ဗဓေလသစ်ခေါင်မိုး Tile
ခရမ်းလွန်ကိုခံနိုင်ရည်ဗဓေလသစ် Synthetic ခေါင်မိုး Tile
ဆောက်လုပ်ရေး Tile 1050mm Nonflammable PVC ဗဓေလသစ် ...
PVC ခေါင်မိုးအုပ်ကြွပ် repl coated တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအာသနန်းစံ ...
PVC ခေါင်မိုးစာရွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သူ ASA Syntheti ...
ASA ဗဓေလသစ် tile ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
ဗဓေလသစ် tile ကို
ဒြပ် tile ကိုဗဓေလသစ်
CO-WIN (ဟောင်ကောင်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် LIMITED
ဖုန်းနံပါတ်: 0086-130 3887 6051
E-mail ကို: sales@co-winhk.com